Kpọtụrụ | Martech Zone
Tupu ị nyefee arịrịọ gị, biko gụọ ihe ndị a:
jiri anyị Nyefee ụdị mpempe akwụkwọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịma ọkwa ma ọ bụ nyefere anyị otu isiokwu.
jiri anyị ibe mgbasa ozi ma ọ bụrụ na ị na-achọ omenala mgbasa ozi ma ọ bụ nkwado ngwugwu.
Kpọtụrụ DK New Media ma ọ bụrụ na ị na-achọ ikwu okwu, ụlọ ọrụ, ma ọ bụ ndụmọdụ na mgbalị ịzụ ahịa dijitalụ gị.
Ọ ga - amasị gị ịdenye aha na Akwụkwọ Akụkọ Anyị Kwa Izu?
Nkọwa - Olee otu anyị nwere ike isi nyere gị aka?*